နှုန်းထားများ | June 2021
Application သည်မှန်ကန်စွာ (0xc000007b) windows 10 ကိုစတင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ
လျှောက်လွှာကိုရယူခြင်းသည် ၀ င်းဒိုးအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်ဂိမ်း ၁၀ ခုဖွင့်စဉ် 0xc000007b) 0xc0000005, 0xc0150002, 0xc0000018 သို့မဟုတ် 0xc0000018 သို့မဟုတ် 0xc0000142 ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စတင်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း။ သင့် system နှင့်အတူ bit ။ ဒီမှာဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ
Fix display driver သည်တုံ့ပြန်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး windows 10 ကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ခဲ့သည်
ရယူခြင်း Display driver သည်တုန့်ပြန်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်လာပါကသင်၏ကွန်ပျူတာသည်ခေတ္တခဏချိတ်ထားခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဂရပ်ဖစ်ကဒ်သည်ခွင့်ပြုထားသောအချိန်အတွင်းတုန့်ပြန်မှုမပြုသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိချိန်တွင် Timeout Detection and Recovery (TDR) ၏အင်္ဂါရပ်က registry editor တွင်ဤ TDR အချိန်ကုန်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်ဖြေရှင်းသည့်အခါပြoccursနာတက်သည်။
login 2021 ပြီးနောက် windows 10 အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ကို cursor ဖြင့်ပြင်ရန်နည်းလမ်း ၇ ခု
၀ င်ရောက်ပြီးနောက် (သို့) login မလုပ်မီ cursor ဖြင့် windows 10 အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ကို ၀ င်းဒိုးပြသခြင်းကြောင့်အမှားဖုံးနေသောအမှောင်မျက်နှာပြင်တွင် ၀ င်းဒိုး ၁၀ ကွန်ပျူတာသည် (Driver ပြissueနာ (လက်ရှိ windows version၊ Corrupted၊ ခေတ်မမှီတော့သော) နှင့်မကိုက်ညီပါ။ Mode နှင့် Display / Graphics Driver ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ
အမှား 0x803F8001 Paint 3D ကို Windows 10 တွင်လောလောဆယ်မရရှိနိုင်ပါ
Paint 3D ကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားစဉ် 'သင်၏အကောင့်ကိုစစ်ဆေးပါ။ Paint 3D သည်သင်၏အကောင့်တွင်မရှိပါ။ ' အမှားကုဒ် 0x803F8001. ပေးသည်။ ဤအမှား၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာမိုက်ကရိုဆော့ဖ်အကောင့်နှင့်သင်၏စက်ကြားပြissueနာကိုထပ်တူပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်အကောင့်ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီးပြtheနာကိုဖြေရှင်းပြီးကြောင်းစစ်ဆေးပါ
System နှင့် compressed memory windows 10 တွင်မြင့်မားသော disk အသုံးပြုမှု
System နှင့် Compressed Memory တို့မှ ၁၀၀% Disk Usage ကိုသင်သတိပြုမိသဖြင့်၊ ဤ Windows 10 System ကြောင့်တုံ့ပြန်မှုမရှိခဲ့ပါ။ System ကိုပြုပြင်ရန်နှင့် compressed memory မြင့်မားသော disk အသုံးပြုမှု၊ 100% CPU အသုံးပြုမှု drive များအားလုံးအတွက်အလိုအလျောက်ပြန်ပို့ခြင်း၊ System Disable နှင့် Compressed Memory ကို task scheder မှညှိပါ
ဒီနေရာတွင် windows 10, 8.1 and7တွင်သင့်တော်သော printer driver ပြproblemနာကို Windows မှဖြေရှင်းရန်အခြားအသုံးပြုသူများအားကူညီပေးသည့်အဖြေနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။
System နှင့် Compressed Memory တို့မှ ၁၀၀% Disk Usage ကိုသင်သတိပြုမိပြီး၊ ဤ Windows 10 System ကြောင့်တုံ့ပြန်မှုမရှိပါ System ကိုပြုပြင်ရန်နှင့် compressed memory မြင့်မားသော disk အသုံးပြုမှုကိုပြုလုပ်ရန်၊ ၁၀၀% CPU အသုံးပြုမှုသည် drive schedules အားလုံးအတွက် paging ဖိုင်အရွယ်အစားကိုအလိုအလျောက်ပြန်ယူခြင်း၊ System Disable နှင့် Compressed Memory ကို task schederer မှညှိပါ။
Windows 10 Night Light Update ပြီးနောက်အလုပ်လုပ်မလား။ ဒီမှာဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ
Display setting တွင်မီးခိုးရောင်ဖြစ်သောကြောင့် Light Night အင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့ ်၍ မရနိုင်ပါ။ ဤတွင်ဖြေရှင်းချက်များသည် Windows 10 တွင် Night Light Options ကိုအမြန်ဆုံးဖြစ်စေသည်။
၀ င်းဒိုးတွင်“ Disk ဖွဲ့စည်းပုံပျက်စီးယိုယွင်း။ ဖတ်မရသောအချက်” ကိုပြုပြင်ရန်အဖြေများ
တည်နေရာမရနိုင်ပါ။ Disk ဖွဲ့စည်းပုံသည်ပျက်စီး။ မဖတ်နိုင်သောကြောင့်သင်၏ hard drive (သို့) USB စက်ယိုယွင်းခြင်း၊ မဖတ်နိုင်သည့် disk ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။
၀ င်းဒိုး ၁၀ တွင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုပြproblemsနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း (ဖြေရှင်းနည်း ၉ ခု)
ဝင်းဒိုး ၁၀ အင်တာနက်အလုပ်မလုပ်ဘူးလား၊ ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်မထားဘူး၊ ဒီမှာပြtheနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
Windows 10 update ကိုနှေးကွေးသော Laptop? ဒီနေရာမှာပိုမြန်အောင်ဘယ်လို
Windows 10 နှေးနေလား။ ၀ င်းဒိုး ၁၀ ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလည်ပတ်နိုင်ရန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်နေပါသလား။ ဗိုင်းရပ်စ်၊ malware ကူးစက်ခြင်း၊ မလိုအပ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များဖယ်ရှားခြင်း၊ Startup အစီအစဉ်များကိုပိတ်ခြင်း၊ နောက်ခံအသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ Visual Effects & Animations၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စွမ်းအင်စီမံကိန်း၊ Virtual Memory စသည်တို့ကိုပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေးပါ။
Windows.OLD ဆိုတာဘာလဲ။ Windows 10 1903 မှာဖိုဒါကိုဘယ်လိုဖျက်ပစ်ရမလဲ
အကယ်၍ သင်သည်လက်ရှိ ၀ င်းဒိုးများအတွက် Version 1903 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါက Disk Spaceup အချို့လွတ်မြောက်စေရန်အတွက် Disk Cleanup Tool ကို အသုံးပြု၍ Windows.old Folder ကိုအလွယ်တကူဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
Err_connection_reset များသောအားဖြင့်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားနေသော website သည် destination site နှင့် connection မတည်နိုင်သည့်အခါများသောအားဖြင့်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဒီမှာဘယ်လိုပြင်ရမလဲ
USB Mass သိုလှောင်ရေးကိရိယာထုတ်ယူခြင်းပြProbleနာဤစက်သည်ယခုလက်ရှိအသုံးပြုနေသည်
မှားယွင်းနေသောပြသနာပြသနာ USB Mass သိုလှောင်ရေးကိရိယာထုတ်ယူခြင်း 'ဤကိရိယာသည်လက်ရှိအသုံးပြုနေသောကိရိယာ' USB ကိရိယာကိုလုံခြုံစွာဖယ်ရှားရန်ကြိုးစားနေစဉ်။ ဤအမှားသည်သင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေသည့် USB ကိရိယာကိုလက်ရှိအသုံးပြုနေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ သင်၏အချက်အလက်နှင့်သင်၏ကိရိယာကိုကာကွယ်ရန်စနစ်သည်ထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်စေသည်။ ဒီဟာကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲ
Windows 10 လက်လှမ်းမမှီသော boot device BSOD, Bug Check 0x7B ကိုပြုပြင်ပါ
Startup တွင် BSOD အမှားနှင့် ဆက်သွယ်၍ မရပါ boot device ရယူခြင်း။ ဒီအပြာရောင်မျက်နှာပြင်အမှားကြောင့် Windows ကိုပုံမှန်မကြာခဏ Restart လုပ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်စတင်ရန်ပျက်ကွက်? ယေဘုယျအားဖြင့်ဤအမှား (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) အမှားစစ်ဆေးခြင်း 0x0000007B သည် OS သည် startup လုပ်စဉ်အတွင်း system ၏ဒေတာသို့မဟုတ် boot အခန်းကန့်များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ဆုံးရှုံးသွားကြောင်းဖော်ပြသည်။
windowsပြီလ ၁၀ ရက်၊
Windows 10 April 2018 update v1803 ကို Timeline၊ Nearby Share, Focus assist, local account အတွက် Password recovery, Microsoft Edge တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ Privacy ချိန်ညှိချက်များ၊ Cortana မှတ်စုစာအုပ်စသည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်အတူအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ , ချိန်ညှိချက်များအက်ပ်နှင့်အခြားအရာများ။
အပြီးသတ်ဖြေရှင်းချက် - Google Chrome တွင်“ သင်၏ဆက်သွယ်မှုသည်လျှို့ဝှက်ခြင်းမရှိ” အမှား
Chrome အမှားများကိုသင်ရနေလျှင်သင်၏ဆက်သွယ်မှုသည်လျှို့ဝှက်ကွန်ယက်မဟုတ်ပါ။ err_cert_common_name_ invalid ပြောင်းလဲခြင်းနေ့စွဲနှင့်အချိန်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်တိုင်းဒေသကြီးကိုပုံသေအကူအညီပေးရန်
[Fix] အက်ပလီကေးရှင်းများမကြာသေးမီက Windows 10 အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးနေ
Windows 10 Fall Creators Update ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်အချို့သောအက်ပ်များတွင်အက်ပလီကေးရှင်းအချို့ပျောက်နေသည်။ ပျောက်ဆုံးနေသော app များသည် Start Menu တွင်မရှိတော့သကဲ့သို့ app များစာရင်းတွင်လည်းပါ ဝင်၍ မရပါ။ ပျောက်ဆုံးနေသော Cortana app ကိုရှာ။ မတွေ့နိုင်ပါက၎င်းကိုထည့်သွင်းရန် Store သို့ညွှန်ပြပါ။ ဒါပေမယ့် Store ကဒီ app ကို install လုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။